CSS3 Nkuku, Gradients, Onyunyo na ndị ọzọ ... | Martech Zone
Cascading Style Ibé akwụkwọ (CSS) bụ teknụzụ dị ịtụnanya, na-enye gị ohere ịhapụ ọdịnaya dị iche iche na imewe. Anyị ka na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere saịtị nwere ihu ọma na ihu na ihu, na-amanye ha ịdabere na ndị mmepe iji mezie ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebe ụlọ ọrụ gị nọ, ịkwesịrị iti mkpu na otu mmepe gị (ma ọ bụ nweta nke ọhụrụ). Ntọhapụ mbụ nke CSS bụ afọ 14 gara aga! Anyị nọ ugbu a na agba nke atọ anyị CSS3.
A nakweere CSS3 ma kwado ya na ụdị nchọgharị ọhụụ kachasị ewu ewu, ma oge eruola iji nweta uru! Ọ bụrụ na ịhọtaghị ihe ga - ekwe omume na CSS3, otuextrapixel emewo ka a dị mma Infographic na isi atụmatụ enyere site CSS3 - gụnyere itinye ókèala oke (akụkụ gbara gburugburu), opacity (ikike ịhụ site na mmewere), onyonyo oke, ihe onyonyo nzụlite, gradients, ntụgharị agba, ihe ndò na onyinyo font. Enwere ụfọdụ mmetụta dị ịtụnanya na ị nwere ike ịmalite na Nchikota HTML5 na CSS3.
Gịnị kpatara CSS3 ji dị mkpa? Ka ọ dị ugbu a, ndị na-ese ihe na-eji mkpokọta eserese, HTML na CSS emebe ibe weebụ zuru oke nke na-atọ ụtọ. Ozugbo akwadochara ihe eserese niile, ọ nwere ike mechaa nwee ike igbu onye na-ese foto ma ọ bụ Photoshop ma nwee ihe nchọgharị ahụ na-eme eserese na akwa etu anyị ga-achọ ha Nke a ka nwere ike ịbụ afọ iri - mana ka anyị na-abịarukwu nso, ọmarịcha saịtị anyị nwere ike ịzụlite na ịdị mfe ha ga - azụlite na ijiji.